Njirimara na nhazi polar aurora | Netwọk Mgbasa Ozi
N’ezie ị nụtụrụla ugwu ugwu na ị chọrọ ịhụ ihe a magburu onwe ya onu nke uwa. Ihe ndị a bụ ọkụ na-enwu enwu na mbara igwe na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. A na-akpọ ndị na-eme na mpaghara polar polar auroras. Ọzọ anyị ga-akọwa ihe niile ị chọrọ ịma gbasara ya polar aurora na njirimara ha.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ị gafee ụwa ịga n’osisi ma hụ ọmarịcha polar auroras, nọgidenụ na-agụ isiokwu a.
1 Njirimara nke polar aurora
2 Gini mere polar aurora ji di?
3 Otú esi emepụta ya
4 Ihe omimi nke polar aurora
Njirimara nke polar aurora
Mgbe a na-ahụ polar auroras site na ugwu ugwu a na-akpọ ha ọkụ ugwu na mgbe a na-ahụ ha site na ndịda ugwu ndịda ndịda. Njirimara nke abụọ bụ otu ebe ọ bụ na ha sitere n'otu ụzọ. Agbanyeghị, n'akụkọ ihe mere eme niile, ọkụ ugwu na-adịkarị mkpa.
Ihe omuma ndi a n’eme ka mmadu hu n’ime ndu gi. Naanị azụghachi bụ na amụma ya dị mgbagwoju anya na njem ị ga-aga ebe ọ na - eme dị oke ọnụ. Were ya na ị kwụrụ ezigbo ego maka njem iji hụ Northern Lights si Greenland ma ọ pụta na ụbọchị na-aga ma ha enweghị ebe ọ bụla. Have ga-atụgharị aka efu na-akwa ụta na enweghị ike ịhụ ha.
Kacha nkịtị nke ndị auroras bụ na agba akwụkwọ ndụ bụ ihe kasị ukwuu. A ga-ahụkwa odo, acha anụnụ anụnụ, oroma, violet na ọbụna ụda uhie. Agba ndị a dị ka obere ọkụ nke ha nwere ike iji mepụta obere ogbe nke na-efesa mbara igwe. Preddị kachasịkarị dị na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Ebe a ga-ahụ ha ọtụtụ oge dị na Alaska, Greenland, na Canada (lee Northern ọkụ na Norway). Agbanyeghị, enwere ike ịhụ ha site n'ọtụtụ ebe ndị ọzọ n'uwa, n'agbanyeghị na anaghị adịkarị. E nwedịrị mgbe ụfọdụ ebe a na-akọ ụzọ ọhụụ na mpaghara dị nso.
Gini mere polar aurora ji di?
Ihe ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị chọworo kemgbe afọ bụ otú na ihe kpatara polar aurora ji akpụ. Ọ bụ nsonazụ nke mmekọrịta n’etiti Anyanwụ na ụwa. Anyanwu na-ewepụta gas dị iche iche na steeti plasma nke nwere ihe ọkụ eletrik. Ihe ndị a na-agagharị na mbara igwe ruo mgbe ha ruru duewa n'ihi ike ndọda na ala ndọta nke Earthwa.
Mgbe o ruru n’elu ikuku, enwere ike ile ya anya n’elu igwe. Whichzọ nke Sun na-esi ezipu ihe ndị a na mbara igwe niile, ọkachasị, na ụwa bụ site na ikuku nke anyanwụ. Ifufe anyanwụ ọ nwere ike ibibi usoro nkwukọrịta nke ụwa anyị nnukwu ihe ma mepụta ihe ọghọm n’ụwa niile. Cheedị na ị ga-ebipụ ogologo oge na-enweghị ọkụ eletrik ọ bụla.
Ngwongwo ndi nwere ikike eletrik na-agha agha na ihe ikuku gas na magnetosphere nke uwa. Anyị na-echeta na mbara ala anyị nwere magnetik nke na-echigharị ihe dị ukwuu na radieshon electromagnetic ruo na mbara igwe. Ihe ndọta magnetosphere a sitere na ikike ndị ndọta.
Ihe kpatara auroras ji akacha ogologo oge n’elu ogidi ya na akuko ya bu na ihe anakpo achoro ya di ike kari. N'ihi nke a, ihe ikuku eletrik sitere na ifufe nke anyanwụ na-agagharị n'okporo ụzọ ndị a na-etolite magnetosphere. Mgbe irighiri ihe nke ikuku anyanwụ na-adaba na gas nke magnetosphere, a na-emepụta ọkụ nke nwere ike ịhụ naanị site na iche iche nke ụzarị anyanwụ.
Nkukota nke electrons na gas nke magnetosphere meputara bu ihe na-eme ka proton di nma ma puta ihe ma uzo ndi a sitere. Ha n'ozuzu ha, ma ka ha na-agagharị na magnetosphere ha na-abanye na mpaghara polar ebe ikuku oxygen na nitrogen na-eme ka ha dị mma. Atọm na ụmụ irighiri ihe na-enweta ike nke elektrọn na-abịa site na ikuku anyanwụ na-eru ogo dị elu nke ike ha wepụtara n'ụdị ọkụ.
Polar aurora na - adịkarị n'etiti 80 na 500 km elu. Ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na elu auroras na-eme, enwere ike ịhụ obere ihe yana obere nkọwa. Ogologo kachasị elu nke edere pola aurora bụ 640 kilomita.
Banyere agba, ọ dabere na gas gasị nke ndị electrons ga-eji na-asọkọta. Atọm oxygen ndị ha na-adakọkọ bụ nke na-ewepụta ahịhịa ndụ. Mgbe ha jikọtara ọnụ na nitrogen atom ọ na-egosi na agba n'etiti acha anụnụ anụnụ na violet. Ọ bụrụ na ya na ikuku oxygen amịkọlị mana elu ya dị 241 ruo 321, ọ ga-acha ọbara ọbara. Nke a bụ ihe kpatara ha nwere ike nwee agba dị iche iche, mana ha na-achakarị akwụkwọ ndụ.
Ihe omimi nke polar aurora
N'adịghị ka nkwenkwe ndị a ma ama, ha abụghị ihe ịtụnanya metụtara abalị na ọchịchịrị. N’aka ozo, ha puru ime n’oge obula. Nsogbu bụ na na ìhè anyanwụ na-apụghị ịhụ ha nke ọma ma na-adịghị ele ihe nkiri nke ọdịdị anya. Mmetọ mmetụ ọkụ bụkwa ihe ọzọ ịchọrọ.
Na mbu, o yiri ka pola aurora na-adịgide adịgide n'emeghị njem. Otú ọ dị, mgbe o ruru etiti abalị, ụta ndị ahụ ha na-akpụ na-amalite ịkwa ụda ruo mgbe ha yiri ígwé ojii ma laa ka anyanwụ na-awa.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ha, oge na ebe kachasị mma iji debe polar auroras bụ n'abalị na mpaghara polar. Ihe kariri ọkara abalị nke afọ nwere ike ịnụ ụtọ polar auroras Yabụ, ọ bụrụ na ị na-eche echiche ị ga-ahụ ha, chọpụta ebe kachasị mma na oge.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere polar aurora.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Polar aurora
Mmetụta gburugburu ebe obibi nke osisi na icheku ọkụ n'ime ime obodo